Xuquuqda kor ku xusan waxaa dheer oo aad dacwad geysan kartaa Autoriteit Persoonsgegevens (Halkan keddib: “AP”). AP waxa ay kormeerta in sharciyada xogta shaqsiga ah siday ahayd Nederland looga fuliyo. Waxaan door bideynaa in aad marka hore innaga nala soo xiriirto, inta aadan u gudbin AP. Waxaan isku deyeynaa in cabashadaada aan sida ugu wanaagsan u xallino. Macluumadka la xiriirka AP waxa aad ka heleysaa websiteka www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Haddii aad su'aalo, codsi ama cabasho ka qabto ka hawl galka macluumaadkaada ee COA, waxaad ula tegi kartaa leynka warbixinta-COA adeegso ciwaanka e-mailka: info@coa.nl. Waxaan isku deyeynaa in sida ugu dhaqsida badan uga soo jawaabno, si kastaba gudaha hal bil. Marar dhif ah ayaan muddadaasi kordhinaa ilaa iyo ugu badnaan saddex bilood.
Qofka lagala xiriiraayo FG: fg@minjenv.nl t.a.v. dhr. Pieter de Groot.